PITT ကျောင်းသူ / သားများအားလုံးကိုထိပ်ဆုံး ၁၀ တန်းကဘွဲ့မပေးခင်ယူသင့်တယ် - နှုန်းထားများ
Pitt ကျောင်းသူ / သားများအားလုံးကိုထိပ်ဆုံး ၁၀ တန်းကဘွဲ့မပေးခင်ယူသင့်တယ်
အားကစားပွဲကြည့်ခြင်းနှင့်ကြည့်ခြင်း မှလွဲ၍ ကောလိပ်တွင်အရေးအပါဆုံးအရာတစ်ခုမှာအတန်းတက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်စာသင်ချိန်တိုင်းမှာငါတို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းတွေထဲကတစ်ခုကဘယ်အတန်းတွေကိုယူရမလဲဆိုတာပါပဲ။
အဓိကတစ်ခုချင်းစီတွင်သီးခြားလိုအပ်ချက်များရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်းအထွေထွေပညာရေးလိုအပ်ချက်များမှာမူအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအရာ၏အဓိကအချက်မှာဘဝရည်ရွယ်ချက်အတွက်ပင်အဓိကသင်ကြားသင့်သောအတန်းအချို့ရှိသည်။ သင်စိတ်ပညာသင်တန်းကိုတက်ရန်စိတ်ပညာရှင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ၊ ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်တွင်အဓိကသင်ကြားပြီးသြစတြီးယားသမိုင်းကိုလေ့လာနိုင်သည်။
Pitt ကျောင်းသားများပြောခဲ့သည့် Pitt ကျောင်းသားများသင်ကြားသင့်သည့်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခန်းဖြစ်သည်။
အန်နာ Nieuwenhuis နှင့်အတူလူမှုစိတ်ပညာ
ငါကိုယ်တိုင်လူတွေကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ အချို့လူများကအခြားလူများနှင့်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုအများကြီးရခဲ့တယ်။ အတွင်းပိုင်းပconflictိပက္ခကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံအပြင်အခြားသူများအပေါ်သင်မည်သို့သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းသင်၌ရှိနိုင်သောပင်ကိုဘက်လိုက်မှုများကိုသင်လေ့လာသည်။
အကြီးတန်းအရာရှိ Christian Thomas
Rich Scaglion နှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုမနုropဗေဒ
ငါကတကယ်တော့ငါ့ကိုသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်၎င်းတို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ကြောင်းသူတို့ဖြစ်လာသည်ကိုနားလည်ထင်ပါတယ်။ သူက 'ကွဲပြားမှု' သည် 'ယဉ်ကျေးမှုမရှိ' ဟုမဆိုလိုပါဟုအမြဲတမ်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လူမျိုးစုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကို ကျော်လွန်၍ အခြားသူများအားဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျကျရှုမြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးခဲ့သည်။
tiktok အပေါ် disney filter ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
-Maddie Jazwinski, အငယ်တန်း
အေမီ Colin နှင့်အတူဗီယင်နာ 1900
ဗီယင်နာ ၁၉၀၀ သည် Pitt ၌ကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သောအကောင်းဆုံးအတန်း / အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ အေမီ Colin သည်အကြောင်းအရာများစွာကိုသင်ကြားပေးသော်လည်းစိတ်အေးလက်အေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအလွန်နည်းသည်။ နွေ ဦး ရာသီမှာသြစတြီးယားနိုင်ငံဗီယင်နာကိုတစ်ပတ်ကြာခရီးထွက်ခဲ့တယ်။
ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်လေယာဉ်များနှင့်မြို့အလယ်တွင်ကြယ် ၄ ပွင့်ဟိုတယ်များပါ ၀ င်သည်။ သံသယမရှိဘဲ, ငါ Pitt မှာငါ့အချိန်အကြောင်းကိုအများဆုံးသတိရပါလိမ့်မယ်အရာပဲ!
-Brian Fedorka, အငယ်တန်း
ကိုယ့်တစ်ဦး dildo အဖြစ်သုံးနိုငျသောအရာတို့ကို
Brian Fedorka ၏ယဉ်ကျေးစွာဓာတ်ပုံ
Debra Artin နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အပြုအမူ
ဒါဟာမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဦး နှောက်အကြောင်းပါကပျော်စရာပါပဲ။ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ ဦး နှောက်ဟာဘာလဲဆိုတာငါသိပြီးအများစုကငါ့ ဦး နှောက်ကိုစူပါဟီးရိုးလိုထင်လာစေတယ်။
ဒါဟာအာရုံကြောသိပ္ပံသင်တန်းရဲ့နိဒါန်းဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဘိန်းဖြူလိုမကောင်းတဲ့အရာတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းလေ့လာပြီးအရေးကြီးတဲ့အရာတွေကိုအမှန်တကယ်လေ့လာတယ်။ သူကပြောပါတယ်, ငါကအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများလူပြောသကဲ့သို့ကြောက်စရာမဟုတ်, အမှန်တကယ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေခြင်းငှါသင်ယူခဲ့တယ်။ (I.E. မှော်မှို PTSD ကုသအတွက်အမှန်တကယ်လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်။ )
-Tyler Hensley, အငယ်တန်း
ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး Pam Pam O'Brien နှင့်အတူရေးသားခြင်း
ဒါဟာ bullshit လူတန်းစားမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအားလုံးပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများမဟုတ်ပါဘူးသင် '' အားဖြင့်ရ '' လို့မရပါဘူးဒါပေမယ့်သင်သံသယမရှိဘဲ, PR အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ဘဝအတန်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သို့ရေးရမည်ကိုသိရှိထားခြင်းဖြင့်သင်အတန်းမှထွက်လာလိမ့်မည်။
-Erica Spaeth, အငယ်တန်း
ယောသပ်သည် Samosky နှင့်အတူပြုလုပ်ခြင်း၏အနုပညာ
တည်ဆောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသောလမ်းညွှန်ချက်များဖြင့်စီမံကိန်းများကိုသင်လုပ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကို ဦး ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ များသောအားဖြင့်ကျောင်းသားများသည်အထက်နှင့်ကျော်။ သွားပြီး SICK ၏တီထွင်မှုအချို့ကိုပြုလုပ်ကြသည်။
ပထမတန်းမှကျောင်းသားသုံးယောက်ဟာသူတို့ရဲ့တီထွင်မှုတွေအတွက်မူပိုင်ခွင့်တွေတင်သွင်းနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုရှာရန် YouTube ပေါ်တွင်အတန်းတက်ကြည့်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာပါသည်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကဒီအကြောင်းတွေကိုမကြာခဏရွတ်ဖတ်ကြတယ်။ ငါကငါယူနိုင်ကြောင်းအလိုရှိ၏
-Max အကြံပြု၊ အကြီးတန်း
ကိုယ့် soundcloud အတွက်ငွေပေးစရာရှိလား
ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့စူပါလွယ်ကူသောလူတန်းစားပါပဲ။ ရက်ပ်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်း၊ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအဘယ်ကြောင့်ဤမျှများပြားသောသောက်စားမှုနှင့်လူမျိုးရေးဆက်ဆံမှုကိုလေ့လာခဲ့ရသည်။
-Catherine Gee, အငယ်တန်း
ငါထင်တာကတော့ကျောင်းသားတွေကိုလူမှုရေးဗေဒ (သို့) လူမှုရေးဘာသာရပ်သင်တန်းတက်ဖို့လိုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတခြားကျောင်းသားတွေနဲ့ငါလူ့အဖွဲ့အစည်းကိုကြီးထွားစေတဲ့စနစ်တွေ၊ ဘေးဖယ်ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း၊ အမေရိကန်မှာဘယ်လိုပုံမျိုးလဲဆိုတာနဲ့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလို့ပဲ။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့ချသူနိုင်ငံသားများဖြစ်။
-Daneya ဂျွန်ဆင်, အငယ်တန်း
Calum Matheson နှင့်အတူအငြင်းအခုံ
၎င်းသည်သင့်အားပေးအပ်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သို့ယူရမည်၊ သင်၏နေ့စဉ်စွဲဆောင်မှုအပေါ်သင်၏အတွေးအမြင်ကိုအမှန်ပင်ပြောင်းလဲစေသည်။ သူကတစ် ဦး စိတ်ကူးပါမောက္ခရဲ့သူလုပ်ပေးမှာဒါကောင်းသောပါပဲ။ ဒါဟာတကယ့်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အတန်းဖြစ်ပြီးတကယ့်ဘ ၀ နဲ့သိပ်ကိုသက်ဆိုင်တယ်။
ကျွန်းသြစတြေးလျ tayla နှင့်ထောက်ပံ့ငွေကိုချစ်
-Ellan Dunbar, Sophomore
ပြည်သူ့ Dave Deluliis နှင့်အတူစကားပြော
-Emily Yarish, Sophomore